warkii.com » LAMA FILAAN: Mohamed Salah Oo Shaki Geliyey Mustaqbalkiisa Liverpool Laba Maalmood Kaddib Hanashadii Horyaalka Iyo Hadalka Yaabka Leh Ee Kasoo Yeedhay
LAMA FILAAN: Mohamed Salah Oo Shaki Geliyey Mustaqbalkiisa Liverpool Laba Maalmood Kaddib Hanashadii Horyaalka Iyo Hadalka Yaabka Leh Ee Kasoo Yeedhay
Xiddiga reer Masar ee Mohamed Salah ayaa iska diiday inuu shaaciyo in mustaqbalkiisu yaallo garoonka Anfield iyo kooxda uu dhowaanta kula guueystay horyaalka Premier League ee Liverpool.
Mohamed Salah oo Liverpool kula guuleystay Premier League, Champions League, Fifa Club Wold Cup iyo UEFA Super Cup, ayaa si lama filaan ah u qirtay in aanu hubin mustaqbalkiisa iyo halka uu ka ciyaari doono, xilli ay kooxdiisu ku jirto damaashaadka hanashada horyaalka ee Arbacadii koobka gacanta laga saaray.
Laacibkan oo xili ciyaareedkan dhaliyey 19 gool oo horyaalka Premier League ah, guud ahaanna 94 gool u saxeexay Liverpool 151 ciyaarood oo uu u saftay tan iyo markii uu Roma uga soo wareegay xagaagii 2017, ayaa waxa heshiiskiisa Anfield ka hadhay saddex sannadood oo kale, laakiin kooxo ay ka mid tahay Real Madrid ayaa si weyn loola xidhiidhiyey inuu tegi doono, inkasta oo muddooyinkii dambe uu Sadio Mane kaga dhowaa kooxda reer Spain.
Mohamed Salah oo ay da’diisu tahay 28 jir, waxa uu diiday inuu ku fikirayo inuu tago Liverpool, laakiin haddana waxa uu shaki geliyey haddii uu Anfield sii joogayo.
Waraysi uu siiyey LA FM Colombia ayaa waxa wax laga weydiiyey mustaqbalkiisa, waxaanu ku jawaabay: “Cidina ma oga mustaqbalka iyo waxa dhici doona. Aynu aragno waxa dhici doona. Hadda waxaanu ku guuleysanay Champions League iyo Premier League, waanan faraxsanahay. Mustaqbalka waxa dhici doonana waynu arki doonaa laakiin waqtigan waxaan ku faraxsanahay koobabka aanu ku guuleysanay.”
Si kastaba, hadalkan Mohamed Salah ayaa waxa uu Liverpool ku abuurayaa hubanti la’aan xiddigeeda goolasha ugu badan usoo dhaliyey saddexdii xili ciyaareed ee ugu dambeeyey.